रुकुमका २१ बर्षे बसन्त ओलीले बनाए चोर पत्ता लगाउने मेशिन…. – पुरा पढ्नुहोस्……
रुकुमका २१ बर्षे बसन्त ओलीले बनाए चोर पत्ता लगाउने मेशिन….
ओलीले घरको छतमा राखिएको पानीको ट्यांकीमा आवश्यक पर्ने वाटर सेन्सर पनि बनाएका छन् । यसले ट्यांकीमा पानी सकिएपछि स्वतः विद्युतको मोटर अन गर्ने र पानी भरिएपछि स्वतः मोटर बन्द गर्ने काम गर्ने उनको दाबी छ । आफूले तयार पारेका एक सय वटा वाटर सेन्सर बिक्रीका लागि बजारमा गएको र माग बढिरहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै दिउँसोमा आफै निभ्ने र रातिमा आफै बल्ने अटोमेटिक बत्ती पनि बनाएर प्रयोग गरिरहेको उनि बताउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट
Prevनेपाल प्रहरीको सीआईबीले पक्राउ गर्यो काठमाडौँमा १२ जना नक्कली डाक्टरहरु
Nextसुरक्षा गार्डको हत्या गर्ने व्यक्ति परे पक्राउ
अन्तत:नेपाल छोडीन सोनिकाले -(भिडियो सहित)
बखतले यसकारण प्रतिभासंग गर्दैछन् दोश्रो पटक बिहे, यस्तो छ तयारी-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)